Xildhibaano ka laabtay Mowshinkii Xukuumada, iyo kuwa kale oo Soodhweeyay – SBC
Xildhibaano ka laabtay Mowshinkii Xukuumada, iyo kuwa kale oo Soodhweeyay
Posted by Webmaster on May 21, 2013 Comments
Xildhibaano ka tirsanaa kuwii mowshinka ku soo rogay xukuumada raiisul wasaare Saacid ayaa qalabka warbaahinta ka shaaciyay habeennimadii xalay in ay dib uga laabteen mowshinkaasi .
Xogwareysi ay siiyeen xildhibaanadan ka laabtay mowshinkaasi qaarkood warbaahinta ka howlgasha magaalada Caasimada ah waxa ay ku sheegeen in ay dib uga laabteen mowshinkaasi si ay fursad u siiyaan xukuumada uu horkacayo raiisul wasaare saacid oo markii hore lagu dhaliilayay in aysan ula iman howlihii loo igmay sidii loogaga baahnaa.
Waxa ay ku fasireen ujeedka ka dambeysa in ay isku raacaan dib uga laabashada Mowshinkaasi isku xirnaansho la’aan iyo deg deg u sameyn mowshin lagu duminayo xukuumad dhisan, ayna la noqotay in ay jiraan dano kale oo laga leeyahay xukuumada Saacid.
Xildhibaanadan ayaa ku baaqay sidoo kale in fursad la siiyo xukuumadan si ay u hesho waqti ay wax qabad ku muujiso hadiise aysan muujin waxqabadka fursadaas baarlamanku ka tashado sidii laga yeeli lahaa.
Qaarkood Mudane yaasha Baarlamanka siiba kuwii ka soo horjeeday mowduuca kalsooni kala noqoshada Xukuumada haatan jirta ayaa iyaguna ku tilmaanay talaabada xildhibaanadan shaaciyay in ay ka laabteen mowshinkaasi mid lagu farxo oo ay siweyn u soo dhaweynayaan